မောင်တောတွင် ရွာသို့ ပြန်လာစဉ် လမ်းတွင် ပျောက်ဆုံးနေသော ရခိုင်လူငယ် ၃ ဦးအား ကူညီရှာဖွယ်ပေးရန် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိခင်ဖြစ်သူက တောင်းဆို | ngalone
← ရန်ကုန်တွင်ကပြမည့် စောမဲကျီပြဇာတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကံဒိုင်းတိုက်နယ်အသင်း (ရန်ကုန်)က ကြေညာချက်ထုတ်
အနောက်တံခါးကို ကာကွယ်လိုသော ရခိုင်လူငယ်များကို ဒေသန္တရရဲ ဖွဲ့စည်းကာ လက်နက်တပ်ဆင်ပေးမည် →
မောင်တောတွင် ရွာသို့ ပြန်လာစဉ် လမ်းတွင် ပျောက်ဆုံးနေသော ရခိုင်လူငယ် ၃ ဦးအား ကူညီရှာဖွယ်ပေးရန် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိခင်ဖြစ်သူက တောင်းဆို
သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ / ရခိုင်ဂေဇက်
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း မိမိကျေးရွာသို့ ဆိုင်ကယ် စီးပြီး ပြန်လာစဉ် လမ်းတွင် ပျောက်ဆုံးသွားသော လူငယ် ၃ ဦးအား ကူညီရှာဖွေပေးရန် မိခင်ဖြစ်သူက ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးညီပု ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံသော ခရီးစဉ်တွင် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများ ၊ နယ်ခြားစောင့်ရဲမှူးချုပ် ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ သည် အောက်တိုဘာလ၂၇ ၊ ၂၈ ၊ ၂၉ ရက်နေ့များတွင် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း လည်လှည့်ကာ ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ရွက်ညိုတောင်ကျေးရွာတွင် သားပျောက်မိခင်က ငိုယိုကာ ယင်းသို့ တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပျောက်ဆုံးနေသော ရခိုင်လူငယ် ၃ ဦးမှာ ရွက်ညိုတောင် ကျေးရွာမှ ၂ ဦးနှင့် စံပယ်ပင်ရင်း ကျေးရွာမှ ၁ ဦး ပေါင်း ၃ ဦးတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရွက်ညိုတောင်ကျေးရွာမှ ပျေက်ဆုံးနေသော မောင်ထွန်းနိုင်သိန်း ( ၁၈ ) နှစ်နှင့် မောင် ညီပုချေ ( ၁၉ ) နှစ်တို့သည် အကြမ်းဖက်မှုမဖြစ်မီ တစ်ရက်အလိုက ကျေးရွာအတွင်း အလှူလုပ်ရန် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်များကို ဖက်ဝန်းချောင်းကျေးရွာသို့ သွားရောက် ရောင်းချနေစဉ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် အကြမ်း ဖက်မှုဖြစ်စဉ် ကြောင်း မိမိကျေးရွာသို့ ပြန်လာနိုင်ပဲ ဖက်ဝပ်ချောင်း ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာ လ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲခန့် အချိန်တွင် ၄င်းမောင်ထွန်းနိုင်သိန်းနှင့် မောင်ညီပုချေတို့သည် ဆိုင်ကယ် တစ်စီးကို အတူစီးကာ လမ်းသွားအဖော် စံပယ်ပင်ရင်း လူငယ် ၁ ဦးတို့နှင့်အတူ ဖက်ဝန်းချောင်းကျေးရွာမှနေ မိမိတို့ ကျေးရွာများသို့ ပြန်လာစဉ် ယခုအချိန်ထိ အိမ်ပြန် မရောက်ရှိပဲ လမ်းတွင် ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကျးရွာတွင် လုံခြုံရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော နယ်ခြားစောင်ရဲအရာရှိများက ယင်းသို့ စုံစမ်းရရှိသည့် သတင်းအရ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများနှင့် ရဲမှူးချုပ်သူရစန်းလွင်ထံတင်ပြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများနှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲကွပ်ကဲရေးမှူး ရဲမှူးချုပ် သူရစန်းလွင်တို့သည် ပျေက်ဆုံးသွားသော လူငယ် ၃ ဦးသတင်းအား အဆက်မပြတ် လိုက်လံ စုံစမ်းပြီး ဖက်ဝမ်းချောင်းကျေးရွာနှင့် ရွက်ညိုတောင်ကျေးရွာကြားတွင် တည်ရှိသော ဘင်္ဂလီကျေးရွာများအား ၀င်ရောက်ရှာဖွယ်ရန် ၄င်းကျေးရွာတွင် လုံခြုံးရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များကို အမိန့်ပေးမှာကြားခဲ့သည်။
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← ရန်ကုန်တွင်ကပြမည့် စောမဲကျီပြဇာတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကံဒိုင်းတိုက်နယ်အသင်း (ရန်ကုန်)က ကြေညာချက်ထုတ်